Kani waa masaafada maalinlaha ah ee faras safri karo Immisa ayay ordaan? | Fardaha Noti
Monica Sanchez | | kuwa kale
Waagii hore, farduhu waxay ahaayeen waxyaalaha ugu muhiimsan ee dadku ku khasbanaan karaan inay safraan masaafo dheer. Waxay ahaayeen sida baabuurta aan maanta haysanno, oo ay ku kala duwan yihiin inay xayawaan ahaayeen. Waxa ugu xiisaha badan dhamaan waa in lagu qasbay inay safraan masaalooyin dhaadheer dhamaadka maalinta. Marka hore waxba ma dhicin, maadaama ay u diyaar garoobeen. Laakiin su’aasha dhabta ahi waxay tahay Ilaa intee ayey socon karaan, dhamaadka maalinta?
Waxaa muuqata in haddii xayawaanku u diyaarsanaa ay iyaguna wax badan socon karaan. Laakiin ha moodin inay baabuur ahaayeen. Waxba kama sii dheeraan karaan runta, maadaama tirada kilomitir ee la heli karo ay ku tiirsan tahay (oo ay kuxirantahay) wadada, da'da faraska, nooca iyo xaaladdiisa caafimaad. Isirrada xaaladaha ee wax badan ku yeelan kara kiiloomitirkii la sameeyay.
1 Immisa kiilomitir ayay safri karaan maalintii?
2 Immisa ayey farduhu ordaan?
Immisa kiilomitir ayay safri karaan maalintii?
Farduhu guud ahaan way ordi karaan 30 iyo 45 kiilomitir maalintii. Haddii ay dhacdo inaad wax rarto, masaafadaas waxaa loo dhimay 30 kiiloomitir 24 saac gudahood. Waxay umuuqataa xaddidaad aad u weyn, laakiin maahan. Xaqiiqdii, kahor intaanay jirin xitaa adeegyo ku saleysnaa fardaha. Tusaale ahaan, haddii aad dooneysay inaad dad daabusho, waxay ahayd inaad abaabusho safarro dhaadheer oo socon kara illaa toddobaadyo.
Hadda fardaha si dhib yar looma isticmaalo in lagu safro masaafo dheer. Waxaa jira kiisas aad u yar, haa. Haddii ay dhacdo inaad safarto boqollaal kiilomitir, waxaa ugu wanaagsan in la doorto nooc baabuur ah. Ka fudud, dhakhso badan oo ka raqiisan.
Immisa ayey farduhu ordaan?
Waxaan aragnay inta ay socon karaan maalintii, laakiin, Maxaad ku hartay hamiga ah inaad ogaato waa maxay xawaaraha ugu badan ee ay gaari karto? Hagaag, ha walwalin, waanan kuu sheegeynaa sidoo kale.
Xawaaraha ugu badan wuxuu kuxiranyahay jirka faraska iyo waliba astaamaha dhulka, tan iyo ilaa Ingiriisi Thoroughbred, oo ah midka ugu dhaqsaha badan faraska, ayaa dhibaatooyin adag ku yeelan doona dhulka dhagaxa ah. Laakiin haddii loo qaato inay caafimaad tahay oo dhulku siman yahay, gallop karaa xawaare celcelis ahaan ka badan 70 kiilomitir saacaddii, taas oo u dhiganta qaadashada gaariga oo ay ku xiran tahay qalabka afaraad (ama shanaad, iyadoo ku xiran matoorka iyo wadada).
Nooca Faraska Thoroughbred
Laakiin marka lagu daro Ingiriisiga Thoroughbred, waa in la sheegaa inay jiraan noocyo kale oo isku mid ah oo la yaab leh. Sidaa darteed, halka fardaha Carabta ay mari karaan waddooyin dhaadheer, Quater-ka Mareykanka waa kuwo aan caadi aheyn tartamada gaagaaban.
Waa wax xiiso leh, maahan?
Wadada buuxda ee maqaalka: Fardo Noti » kuwa kale » Intee in le'eg ayuu faras socon karaa
Habeen wanaagsan, waxaan aqriyay faallooyinkii hore. Waa inaan iraahdaa kuma raacsani jawaabo badan oo la bixiyo. Aynu bilowno… farasku ma cunaa 5 kg maalintii? taasi ... waxay noqon doontaa lagama maarmaan in xisaabta lagu darsado haddii ay curyaan tahay '.. haddii ay maalin walba shaqeyso? .. haddii ay daaq daaq tahay maalintii oo dhan, haddii cawsku yahay gu' ama jiilaal. Ma siin kartid faras 5kg maalintii quudinta ... ilaa ay ka ahaato dhul beereed. Iyo safarada dhaadheer, ma ahan qaali, aadna uga raqiisan isticmaalka gaariga. Waxaa laga yaabaa in Camino de Santiago 700 km qiyaastii, xujaajtu ma ku sameeyaan gaari? .. Miyaanay ku qaban karin faras? Baatroolku ma ka raqiisan yahay sidaan filayo? .. Faraska wuxuu cunaa kiiloomitir kasta. socdaalo? .. sida baabuurta oo kale? ..
Jawaab Jose Domingo
Guillermo Angeles Maya dijo
Tan iyo caruurnimadaydii, waxaan layaabay inta farasku xajisan karo, jiidayo masraxa ama fuulitaanka dusha sare, labadaba gallop iyo waxqabad maalintiiba. Haa, wax waliba waa qaladka shaleemada iyo aqrinta ololaha Francisco Villa, oo ay weheliso jacaylka iyo bogaadinta xayawaanadaas ee suura galiyay taariikhda aadanaha. Mahadsanid
Jawaab guillermo angeles maya
Subax wanaagsan, maxaad igula talineysaa inaanan faras u qaadan jimicsiga safarka dheer Sidee iyo intee le'eg saacad nasasho iyo cunto ah ayaa la siiyaa?
Aniga oo tixgelinayna xogtan, filimka Gladiator, waqtiga ay ku qaadatay Máximo inuu kaga baxsado Vindobona (Vienna) ilaa Trujillo waa inuu u dhexeeyay 77 ilaa 90 maalmood.
Sida faraska looga saaro shilinta